Stroktoralisma - Wikipedia
Ny stroktoralisma dia fitambarana fisainana manao ny zava-miseho anaovana fikarohana ho vondrona tokana tsy azo zarazaraina, izay niseho indrindra tamin' ny siansan' ny maha-olona sy fiarahamonina tamin' ny tapaky ny taonjato faha-20, miaraka amin' ny fampiasana ny teny hoe rafitra (structure) izay takarina ho môdely teôrika (tsy mahatsiaro tena na tsy azo tsapain-tanana) mandamina ny endriky ny zavatra dinihina ho toy ny rafitra. Ny fanantitranterana dia kely kokoa amin' ireo singa fototra amin' ity rafitra ity raha mitaha amin' ny fifandraisana izay mampiray azy ireo.
Raha ny amin' ny famaritana dia tsy miray ny firehana maro, nefa voalamina tsikelikely izany tamin' ny fanorenana ny siansan' ny maha olona sy fiarahamonina nanomboka tamin' ny faran' ny taonjato faha-20 teo amin' ny firehana pôzitivista; nijanona ho andraikitry ny haiteny sy ny haifeo izy io mandra-pahatongan' ny fampiasana azy ankapobeny taorian' ny taona 1945.
Ny famariparitana ny fetra ara-tsainan' ny stroktoralisma taorian' ny taona 1945 dia lasa sehatra fikarohana mahaleo tena feno sy saro-drafitra ary mivoatra, miaraka amin' ny fahasamihafana lehibe arakaraka ny firenena sy ny taranja akademika. Ny teny hoe stroktoralisma dia mazàna manondro ny hetsi-kevitra maro taranja an' ny Frantsay indrindraindrindra nanomboka tamin' ny taona 1950 ka hatramin' ny taona 1970 izay voamariky ny finiavany ho amin' ny fisarahana ara-tsaina, ny fandavany ny lafiny ara-tantara sy ara-potoana ary ny fananterana ny endrika momba ny atao hoe rafitra; ity "fotoana ara-drafitra" ity, izay tena aingam-panahy avy amin' ny haitenin' i Saussure, dia nihoatra ny sisintanin' ny anjerimanontolo ka nanafika ny sehatry ny literatiora sy ny an' ny filazàm-baovao ary an' ny pôlitika. Izy io dia voalamina manodidina ireo olo-malaza vitsivitsy toa an' i Claude Lévi-Strauss eo amin' ny sehatry ny antrôpôlôjia, i Roland Barthes eo amin' ny sehatry ny literatiora, i Jacques Lacan eo amin' ny sehatry ny psikanalizy, i Michel Foucault ary i Louis Althusser eo amin' ny sehatry ny filôzôfia.
Na izany aza, ny hamaroan' ireo taranja voakasika sy ny fomba fiasa dia maneho ny maha-samihafa an' io famaritana mahazatra io, ary ny mpanoratra sasany (toa an' i Jean Piaget eo amin' ny sehatry ny psikôlôjia, i Jean Petitot eo amin' ny sehatry ny epistemôlôjia) dia nisafidy ny fampidirana ny stroktoralisma amin' ny tantaran' ny hevitra siantifika nandritra ny fotoana ela, amin' ny maha fisehoan' ny teôrian' ny fahalalana amin' izao fotoana izao, miaraka amin' ny tetiarana miverina amin' ny filôzôfian' ny endrika novelarin' i Aristôty.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Stroktoralisma&oldid=1041574"
Voaova farany tamin'ny 16 Desambra 2021 amin'ny 13:29 ity pejy ity.